Manangana laha-tahiry an-tserasera ho an'ny WordPress miaraka amin'ny GravityView | Martech Zone
Manamboara lahatahiry an-tserasera ho an'ny WordPress miaraka amin'ny GravityView
Sabotsy, Oktobra 24, 2020 Sabotsy, Oktobra 24, 2020 Douglas Karr
Raha anisan'ny vondrom-piarahamoninay nandritra ny fotoana kelikely ianao dia fantatrao fa be fitiavana izahay Volapoky Gravity ho an'ny fananganana endrika sy fanangonana data amin'ny WordPress. Sehatra mamirapiratra fotsiny io. Vao haingana aho no niditra hery misintona Forms amin'ny Hubspot ho an'ny mpanjifa ary miasa tsara izy.
Antony lehibe iray itiavako ireo Forms Gravity dia ny fitehirizany ny angon-drakitra eto an-toerana. Ireo fampidirana rehetra ho an'ny hery misintona Forms dia hamindra ny angona avy eo amin'ny rafitry ny antoko fahatelo. Ilaina izany ho an'ny mpanjifako… Tsy tiako ho very ny angon-drakitra raha midina ny API antoko fahatelo na misy karazana olana fanamarinana hafa. Ny ankamaroan'ny endrika fifandraisana tsotra eny an-tsena dia tsy manao izany.
Ankoatr'izay, miaraka amin'ireo fitaovana toa an'i ReCaptcha sy Google Maps izay miasa ivelan'ny boaty, rafitra iray ihany izy io. Nividy lisansa tranokala tsy voafetra aho taona lasa izay ary nampiasa azy io saika tamin'ny vahaolana mety ho azonao eritreretina.
Ahoana ny fomba hanehoana angona data momba ny hery misintona?
Gravity Forms dia fitaovana mamirapiratra amin'ny fitahirizana angona… fa ahoana raha tena te hampiseho ireo angona ireo amin'ny tranokalanao ianao? Namolavola kajy an-tserasera ho an'ny mpanjifa nanao an'io aho, ary tsy asa tsotra izany. Namolavola vokatra workflow koa aho izay nampiseho angona anatiny ho an'ny admin… io no tena saika natao.
Tongasoa eto GravityView! GravityView dia plugin WordPress azonao ampiasaina hanontana ny angona Gravity Forms anao. Mahafinaritra izany - ary nahazo ny fitahian'ireo Forms Gravity aza izy ho vahaolana tadiavina.
Tsotra fotsiny ny fananganana lahatahiry an-tserasera! Manamboara takelaka iray hisamborana vaovao, avy eo manangana sarintany sy lisitra lahatahiry izay mampiseho ny angona… nefa tsy manoratra tsipika kaody iray akory!
GravityView dia manolotra ny fahaizana manangana fomba fijery tsy manam-petra, mankasitraka ary mandà ny fidirana alohan'ny andehanan'izy ireo mivantana, ary mamela ny fanovana ireo fidirana ireo avy eo aloha. Atambaro ny WordPress, ny Forms Gravity, ary ny Gravity View, ary manana rafitra fitantanana atiny feno mahay ianao izay afaka manangona sy mampiseho angona araka izay tianao.
Ny data dia azo jerena toy ny lisitra, latabatra, tabilao data, na koa amin'ny sari-tany.
Ahoana ny fiasan'ny GravityView?
Mamorona takelaka - Voalohany, mamorona endrika miaraka Gravity form, ny plugin endrika tsara indrindra ho an'ny WordPress. Ampio ny saha amin'ilay takelaka ary apetaho ao amin'ny tranonkalanao.
Angony angona - Avy eo, fenoy ny taratasy. Hotehirizina ao amin'ny fiafarany ao amin'ny tranonkalanao, ao anatin'ny plugin Gravity Forms.
Volavola ny layout - Mamorona ny layout tonga lafatra amin'ny alàlan'ny interface drag-and-drop. Safidio izay saha hampidirina ary aiza no haseho azy ireo. Tsy mila kaody!
Ampio amin'ny tranokalanao izany -
Farany, ampidiro ary asehoy ny angon-drakitrao eo amin'ny faran'ny pejy voalohany amin'ny tranokalanao. Azonao atao ny mijery na manitsy ny fidirana nefa tsy mila mandalo ny menio WordPress.
Sintomy ny GravityView
Fialana andraikitra: Mampiasa ny rohy mpampifandray ahy aho hery misintona Forms ary GravityView ao amin'ity lahatsoratra ity.
Tags: Affiliatemanangona angonalatabatra dataGoogle Mapsendrika misintonagravityviewhubspotlahatahiry amin'ny Internetsarintany wordpress
Mampiasa endrika WordPress sy Gravity hisamborana fitarihana
Ny fitaovana tsara indrindra amin'ny marketing amin'ny mailaka Woocommerce